[OROMO] Ijoolleen Umrii Kurnanii Keessa war Jiran Sababa Dhukkubi Dadrbaa COVID 19 Talaalii Kan Hinfudatin Amaa akka Fudhatan Godhaa (Get Your Teen Back on Track with Vaccines Missed During the COVID-19 Pandemic) | News & Blog | KFAI - Minneapolis + St. Paul
Now Broadcasting [OROMO] Ijoolleen Umrii Kurnanii Keessa war Jiran Sababa Dhukkubi Dadrbaa COVID 19 Talaalii Kan Hinfudatin Amaa akka Fudhatan Godhaa (Get Your Teen Back on Track with Vaccines Missed During the COVID-19 Pandemic)
Wrist Grow Cold - Heavy Heart
Lilian - Don't Loose My Number
[OROMO] Ijoolleen Umrii Kurnanii Keessa war Jiran Sababa Dhukkubi Dadrbaa COVID 19 Talaalii Kan Hinfudatin Amaa akka Fudhatan Godhaa (Get Your Teen Back on Track with Vaccines Missed During the COVID-19 Pandemic)
covid-19DargaggooDukkub morma jailisuGalmee TalaliiGsaa Talaalii ittis menigitestmorma jalisQakkeeQufaa GogogaaTalaaliiUmrii Kurnanii
August 31, 2021 - Posted in General Announcements by Miriam X.
Bellam qabsistani ijoolleen keessan talaalii akka argatan gochuun yeroon gaarin amma. Ijoolleen sabab dhukkuba dadarba COVID 19 fi tallalii osso hinfudhatin hafan amma fudhachuun qaban. Sabanii isaas ijooleen gama darggaumaan gudataa yammu deman dhukkuba adaa adaaf waan saxilamanif. Talalii yeroo umrii isaanii xixqqoo keenameef yeroo gudachaa deman dhukkuba irra isaan hi ittisu. Kanaf amaa talaalii hinfudhatin hafan fudachuun barbachisaa dhaa.
Ijoolleen umriin isaani 11 if 12 Talaalii sadan gorsaman keessaa tetanus, diphtheria, and pertussis (Tdap), human papillomavirus (HPV), and meningococcal vaccine. Talaalin TDap ittisa quufaa gogogaa qakkeetti, talaalin HPV ittisa dhukkuba goflaa gosa 6 ttii akkasumas Talaaliin Meningococcal jedhame bekkam kuni ittisa dhukkuba morma jalisitti. ijoolleen umrii isaani Jaha (6) kan ta’ani Talaalii gosa lama meningococcal (MenACWY) fi (MenB) fudhachuu qaban.
Ijoolleen umrii kurnanii keessa jiran oggaa isaani 12 taa’an talaalii COVID -19 umrii isaanif kan hiyyamamee osoo mana barumsaa, sporti fi activitellen adaa adaa hin jalqabin dura talaalii yoo argatan, ofii isaanif akkasumas namoota isaan wajiin olan kaneen Talaalii COVID kan hin fudanee dhukkubaaf akka hinsaxilamnee ni gargaaraa. Talaalii COVID-19 fudhachuu mane barumsaafii sportif akkasumaa activitti irra akka hin hafneef ni gargaaraa dargageeyyin kun talaalii fudhachu yoo barbaadhani bellama guyyaa tokkon fudhachuu ni danda’uu.
Tallaiin kun qorannoo keessaa waan darbeef, fayaan namaa irratti wann fiddu hin dqabu. Talaalin yamu keenamu irree irratii xiqoo namatti dagahamaa. Talaalii COVID kan ijoolleef keenam irratii gaafii yoo qabaatani ogeessa fayyaa (Doctor) ijoollee keessan gafadhaa.
Gal-mee talaalii ijoollee keessan argachuuf, talaalii esaa akka argachuu dandessanfi baruuf Yoo ijoolleen keessan insuraansi hin qabaaneelee,kan ilaalaa
Waa’ee talaali gaafi dabaltaa yoo qabatani bilbilaa Minnesota Department of Health kanaan bilbilaa 651-201-5414